२००:: माइक्रोको वर्ष | Martech Zone
बुधबार, डिसेम्बर 26, 2007 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
यो अनलाइन टेक्नोलोजीमा रोमाञ्चक वर्ष थियो। यदि तपाईंले १०,००० फिट दृश्यबाट यसलाई हेर्नुभयो भने, मानवहरूले अझै पनि यो तुलनात्मक रूपमा नयाँ माध्यम, इन्टरनेट कसरी प्रयोग गर्ने भनेर एउटा ट्रेल बज्दछ। सायद यो स्पष्ट छ तर म विश्वास गर्दछु २०० really वास्तवमै वर्ष हो जुन अनुप्रयोगहरू र रणनीतिहरू हुन्छन् माइक्रो.
सामाजिक वेबको विकास (वेब ​​२.०) अब द्रुत रूपमा नयाँ, लक्षित क्षेत्रमा सर्दै छ। विशाल, एक फिट-सबै समाधान सही व्यक्ति र सही सामग्रीको लागि सही जडानको साथ तपाईंलाई सही समयमा प्रदान गर्न विकसित हुँदैछ।
ईमेलले eNewsletters का लागी विशिष्ट प्रयोग पार गर्‍यो र लेनदेनको दुनियामा गति प्राप्त गर्दैछ। यो आफ्नै 'घटना' प्रदान गर्नुको सट्टा ईमेल पठाउन समग्र मार्केटिंग रणनीतिको अंशको रूपमा ट्रिगर गरिएको छ प्रयोगकर्ताहरूलाई कायम राख्न र उनीहरूलाई उनीहरूको खुद्रा आउटलेट, उनीहरूको सामाजिक सञ्जाल, उनीहरूले पढ्ने ब्लगहरू आदि जडान गर्न।
सीमितताहरूको बाबजूद ईमेल पनि विकसित हुँदैछ मुख्यधारा ईमेल ग्राहकहरु। ईमेल माइक्रो जाँदै छ ... अधिक समयबद्ध सन्देश, अधिक नियन्त्रण, र अधिक घटना चालित।
ब्लगिंग माइक्रो संग गयो twitter, जाइकू र पाउन्स। द्रुत स्निपेट्स जसले एक बाट धेरैमा भर्चुअल कुराकानीहरू सिर्जना गर्दछ।
कम्पनीहरूले पहिलेदेखि नै माइक्रोब्लगिंग प्रयोग गर्न सुरू गरिसकेका छन्, तर हामी २०० 2008 मा माइक्रोब्लगिंगको खुद्रा प्रयोग देख्नेछौं। हामी पनि समूहहरूलाई माइक्रो-ब्लगि inमा राम्रो लिभिंग देख्नेछौं ... जस्तै च्याट रूमहरू एक दशक पहिले सार्वजनिक च्याट अनुप्रयोगहरूमा विकसित भएको।
सामाजिक नेटवर्क को एकाधिकार रणनीतिहरु बाट टाढा जाँदैछन् फेसबुक, माइस्पेस, LinkedIn र प्लाक्सो… र को माइक्रो सामाजिक नेटवर्कमा सार्नुहोस् Ning (नोट: SmarlerIndiana, NavyVets, खेल मार्केटिंग २.०, IndyLance केहि मैले सुरु गरेको छु वा यसमा संलग्न छु!)।
बुकमार्किंग साइटहरू जस्तै Digg जस्तै साइटहरूको लागि परित्याग गरिदै छ मिक्सक्स - जहाँ तपाईं सामेल हुन माइक्रो समूह सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। म सबैलाई प्रोत्साहित गर्दछु जसले मेरो ब्लग पढ्छन् अनलाइन मार्केटिंग समूहमा आमन्त्रितको लागि मलाई सम्पर्क गर्न ताकि हामी लि links्कहरू साझेदारी गर्न सक्दछौं। ट्रुमर्स जस्ता अन्य अनुप्रयोगहरूले पूर्वनिर्धारित कोटिहरूको तुलनामा परिष्कृत लक्षित क्षमताहरूको साथ पप अप गर्न जारी राख्नेछन्।
माइक्रोमा जान भौगोलिक सूचना प्रणाली अनलाइन अधिक र अधिक लाभ उठाईदै छ। गुगल, याहू, र माइक्रोसफ्ट सुधारिएको भौगोलिक खोजीहरूको लागि क्षेत्रीय डेटा बृद्धि गर्न जारी राख्नुहोस्। गुगलले समर्थन पनि गर्दैछ साइटम्यापमा KML, भौगोलिक रूपमा तपाइँको वेबसाइटहरूको पहिचान र अनुक्रमणिका गर्न!
भिडियो माइक्रोमा जाँदैछ (Scobleizer मा नीलको टिप्पणीबाट सिफारिस सहित अपडेट गरिएको पोष्ट)। उटेरज, सेस्मिक र QIK। भिडियो र मोबाइल फोन टेक्नोलोजीहरू कन्भर्ज हुँदैछ, राम्रो गुणवत्ताको साथ भिडियो सजिलैसँग रेकर्ड गर्न र अपलोड गर्न सक्षम छन्!
सेवा अनुप्रयोगको रूपमा सफ्टवेयरलाई ब्रान्डि and र अन्य अनुप्रयोगहरू वा अन्य ब्रान्डहरूमा एकीकरणको लागि पर्याप्त लचिलो हुन दबाव दिइनेछ। कुनै अधिक 'क्यान्ड' अनुप्रयोग हाम्रो लागि खरीद गर्न र राख्नको लागि पर्याप्त राम्रो छैन, हामीले कुनै पनि वातावरणमा हाम्रो अनुप्रयोगहरू रूपान्तरण गर्न हामीले सीएसएस टेक्नोलोजीहरूको लाभ उठाउनु पर्छ। हामीले एप्लिकेसनहरू निर्माण गर्नुपर्दछ जुन साना (माइक्रो) विवरणमा परिमार्जन गर्न सक्षम छ।
त्यहाँ तपाईंसँग यो छ, मेरो भविष्यवाणी २०० 2008 को लागि - माइक्रो रणनीति र माइक्रो व्यवसाय अनुप्रयोगको वर्ष। सिर्जना गर्ने क्षमता जस्तै समूहहरू, भौगोलिक रूपमा केन्द्रित अनुप्रयोगहरू, माइक्रो ब्रान्डित सास, वा साधारण सामाजिक समूहहरू २०० 2008 मा पूर्ण रूपमा लाभान्वित हुनेछन्। जसले अनुकूलन गर्दैनन् उनीहरू बिर्सिनेछन्।
टैग: 2008बुकमार्केटिंगभौगोलिक सूचना प्रणालीgisनक्सा2008 मार्केटिंगमाइक्रोसामाजिक संजालसामाजिक संजालसफ्टवेयर सेवाको रूपमा
डिसे 27, 2007 मा 2: 47 AM
तपाईंको मिक्सक्स समूह तपाईंको ग्राहकहरूको लागि खुला छैन। मैले जोड्नको लागि तपाईंको लिंकमा क्लिक गरें र यो सन्देश पाएँ:
“ओहो! केहि गलत छ।
Pssst: तपाईंलाई अहिलेसम्म यो समूहमा आमन्त्रित गरिएको छैन, त्यसैले होईन, तपाईं त्यो गर्न सक्नुहुन्न। तर राम्ररी सोध्नुहोस् र हुनसक्छ उनीहरू तपाईंलाई भित्र जान दिन्छन्। वा आफ्नै समूह सुरु गर्नुहोस्! ”
डिसे 27, 2007 मा 9: 35 AM
दुर्भाग्यवस, मिक्सक्सले 'खुला समूहहरू' प्रस्ताव गर्दैन (जहाँसम्म म भन्न सक्छु!)। यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, मेरो सम्पर्क फारम प्रयोग गर्नुहोस् र मलाई तपाईंको ईमेल ठेगाना पठाउनुहोस् र म तपाईंलाई आमन्त्रित गर्दछु!
डिसे 27, 2007 मा 5: 49 AM
'Mediasnacks' चारै तिर ध्वनिहरू 😉
डिसे 27, 2007 मा 10: 33 AM
यदि सबै कुरा वास्तवमै सूक्ष्ममा जान्छ, र तपाइँले भनेको कुरा सही हो भनेर मँ सहमत हुनुपर्दछ भने व्यक्तिहरूको रूपमा हामी साना कुराकानीको भाग हुनेछौं, जस्तै यदि तपाइँ ठूलो पार्टीमा हुनुहुन्छ र or वा १० मानिसहरू रातभर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ।
अन्तत: हामी वास्तव मा यी पार्टीहरु को बारे मा पत्ता लगाउन को लागी एक महान तरीका चाहिन्छ सबैलाई जस्तै यस साल फेसबुक को बारे मा फेला पर्यो।
यस समस्याको बारेमा मैले देखेको छु र प्रयास गरिरहेको छु कि वास्तविक समस्याहरू मध्ये एक हो ठूलो परिवर्तनहरू र यसलाई जारी राख्न कति गाह्रो भयो। मैले फेला पारे कि मैले नयाँ टेक्नोलोजीको बारेमा मैले सिकेको मानिस जस्तो गरी मेरो गुगल रिडरमा आरएसएस फिडहरू पढेर सिकेको छु तर ठूलो टेक्नोलोजी गुमाउन यो सजिलो छ यदि अरिंग्टन बाहेक कसैले हामीलाई के हेर्न लगाउँदैन भने।
डिसेम्बर १, २०१ 27 2007:२:12 अपराह्न
हे, उल्लेखका लागि धन्यबाद। कुनै पनि हिसाबले मैले तपाईंको पोष्टको मान कम गर्न चाहिन। जहाँसम्म मेरो चिन्ता छ तपाईं पैसामा हुनुहुन्छ। हुनसक्छ शिष्ट चीजलाई यहाँ पहिलो टिप्पणी गर्नु पर्ने थियो, यद्यपि त्यो "साघुँरो गरिरहेको" पनि हुन सक्छ। यद्यपि तपाईको पोष्ट पढ्दा म खुशी भए। चियर्स
डिसेम्बर १, २०१ 27 2007:२:2 अपराह्न
चिन्ता छैन, शून्य! तपाईंले एक ठूलो बिन्दु ल्याउनुभयो। मैले तपाईंको टिप्पणी पढे सम्म म भिडियोमा डगमगाएँ - र तपाईं सहि हुनुहुन्छ!
डिसेम्बर १, २०१ 27 2007:२:3 अपराह्न
टेक्नोलोजी र नयाँ मिडियामा मलाई सँधै अपील गरेको चीजहरू मध्ये एक चीजलाई म्यास गर्न र नयाँ, रमाईलो सामग्रीहरू सिर्जना गर्ने क्षमता हो (क्षमा गर्नुहोस्, यस भन्दा राम्रो शब्दको लागी सोच्न सक्दैन।) तर यो धेरै सामानहरू यस बिन्दुमा तन्दुरुस्त हुन्छन् कि केवल एक प्रबुद्ध केहीलाई यसको अस्तित्वको बारेमा पनि थाहा हुन्छ। म विशेष गरी ट्विटरमा ह्याशट्याग जस्तो चीजहरूको बारेमा सोच्दै छु। यी सबै जाँदै गरेको माइक्रोलाई वास्तवमा प्रभाव पार्नको लागि क्रममा समाचारहरू प्रसार गर्नका लागि फोन ट्री प्रकारको केहि चीज हुनु आवश्यक छ किनभने - यसको सामना गरौं - धेरै थोरै मानिसहरूले समेत आरएसएस के हो भनेर थाहा पाउँदछन्, एक्लै सदस्यता लिन दिनुहोस्। सबै महत्त्वपूर्ण फिडहरूमा र यसलाई सबै मार्फत सिफ्ट गर्नुहोस्।
अन्तमा, मेरो तर्क यो छ कि मार्केटिंग अवसरहरू जुन मानिसहरूले माइक्रोब्लगिंग र मोबाइल मिडियामा देख्छन् र ती सबै बाँकी वास्तवमा त्यस्ता प्रकारका चीजहरू हुन् जुन म जस्तो व्यक्तिहरू टाढा हुनको लागि दाबी गरिरहेका हुनेछन्। म प्रति सेयरको विचारको विपक्षमा छैन तर त्यहाँ हुनु पर्छ - र यो अत्यावश्यक छ - स्पष्ट हुनुपर्दछ, सरल तरीकाहरू प्रबन्ध गर्न र नियन्त्रण गर्न जुन त्यो अनुभव मेरो लागि कस्तो हो। मलाई लाग्छ OAuth र OpenID जस्ता प्रोजेक्टले यस प्रकारको चीजको सुविधा पुर्‍याउन लामो यात्रा गर्छ तर मलाई लाग्छ कि अझै मानिसहरूलाई काम गर्न बाँकी छ। विश्वको माइक्रो हुने बित्तिकै मार्केटरहरूले आक्रमण गरिरहेका स्पेस व्यक्तिगत रूपमा बढ्दै जान्छ। र म मेरो व्यक्तिगत ठाँउमा आक्रमण गर्न अत्यन्तै दयालुपूर्वक लिदैन। यदि मैले तपाईंलाई भित्र बोलाएँ भने, ठीक छ। तर त्यसो भए म तपाईंलाई बाहिर जान भन्छु, बाहिर निस्कनुहोस् वा म तपाईंलाई बाहिर निकाल्छु।
त्यो मात्र मेरो 02 .XNUMX हो।
डिसेम्बर १, २०१ 27 2007:२:5 अपराह्न
त्यो कम्तिमा निकलको मूल्य हो, जेमी 😉
मलाई लाग्दछ कि तपाईंले दुईवटा चीज राख्नु भयो… पहिले त्यो प्रविधि विकसित हुँदैछ र विकास राम्रो चीज हो। तपाईंले बनाउनु भएको दोस्रो बिन्दु वास्तवमा किन हामीलाई थप राम्ररी ट्युनियमहरू आवश्यक छ। यदि मैले एक उत्पादन वा सेवा पाएको छु जुन तपाईंलाई रुचि छ, तपाईं यसको बारेमा पत्ता लगाउनु भएकोमा कृतज्ञ हुनुहुनेछ (तपाईंको शब्दमा) तपाईंले मलाई आमन्त्रित गर्नुभयो।
प्रविधिको खोजी गर्दै जुन सम्भावनमा उत्पादन वा सेवा ल्याउँदछ वा कसले खोजीरहेको छ आवश्यकता त्यो उत्पादन वा सेवा हामी पछि पछाडि हो। अन्तिम कुरा म गर्न चाहन्छु कि) विज्ञापनमा मेरो पैसा खर्च गर्नु जुन सही व्यक्तिमा पुग्न सक्दैन र ख) तपाई जस्तो क्रोधित व्यक्ति तपाईको अनुहारमा राखेर जब तपाईले यो माग्नुभएन।
म प्रविधिहरूमा विकासको बारेमा उत्साहित छु जसले बजारलाई सँगै ल्याउन जारी राख्नेछ! आशा छ हामी तपाई जस्तो मान्छे रिसाउँदैनौं जब हामी यसलाई बाहिर निकाल्छौं। 🙂
डिसे 28, 2007 मा 2: 43 AM
सबै जानकारीको साथ जुन वेबमा उपलब्ध छ, हामीले यसको अर्थ बनाउनको लागि हामीले फिल्टर गर्नुपर्नेछ। फिल्टर गर्ने उत्तम तरिकाहरू मध्ये एउटा को आलाखि वा अर्को शब्दहरूमा माइक्रो समुदाय वा जानकारीको संस्करण गठन गर्नु हो। म तपाइँको भविष्यवाणी संग पूर्ण सहमत छु।
डिसे 31, 2007 मा 5: 11 AM
यस पोष्टका लागि धन्यबाद। म सहमत छु कि माइक्रो संग शक्ति छ। किन? किनभने यो गर्न सजिलो छ। व्यक्तिहरूले तपाईलाई शीर्ष कथाहरू राम्रो सुरुवात, मध्य र अन्तको साथ लेख्न अपेक्षा गर्दैनन्। र उपभोग गर्न सजिलो छ, अझ राम्रो: 'ब्राउज'। चियर्स
म सोचिरहेको थिए कि यदि कसैले मलाई मद्दत गर्न सक्छ भने। म टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित मार्केटिंगमा सबैभन्दा ठूलो हालको मुद्दाहरूको खोजी गर्दैछु ... कुनै पनि सुझावहरूको धेरै सराहना गरिन्छ ... चीयर्स !!!